မိတ္ထီလာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးအတွင်းကနေပြီး သက်စွန့်ဆံဖြား ပြေးလာကြရတဲ့ ရန်ကုန်ရောက် အပြစ်မဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ | Ko Rohingya
This entry was posted on March 24, 2013, in ဓါတ်ပုံ, မီဒီယာ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, ဓာတုသိန်းစိန်, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, အကြမ်းဖက်သမား, ဦးသိန်းစိန်, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ရန် ဖိအားပေးတောင်းဆိုပေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဗားမားရဲ့ထံကို စာရေးကြရအောင်
စနစ်တကျ စီမံကိန်းချပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ရန်သူအစစ်က ဘယ်သူလဲ →